ESI EDOZI BIOS - N'IHI BEGINNERS - 2019
Esi edozi BIOS
Ntọala nke isi ihe na oge kọmputa gị na-echekwa na BIOS na, ọ bụrụ na ị nwere nsogbu mgbe ị wụnye ngwaọrụ ọhụrụ, ị chefuola paswọọdụ gị ma ọ bụ naanị ịhazighị ihe n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike ịtọgharịa BIOS na ntọala ndabara.
N'ime ntuziaka a, m ga-egosiputa ihe ị ga - esi rụgharịa BIOS na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ ebe ị nwere ike ịbanye na ntọala na n'ọnọdụ ahụ mgbe ọ naghị arụ ọrụ (dịka ọmụmaatụ, edoziwo paswọọdụ). A ga-enwekwa ihe atụ maka ịtọgharịa ntọala UEFI.
Debe BIOS na menu ntọala
Ụzọ mbụ na kachasị mfe bụ ịbanye na BIOS ma tọgharịa ntọala site na menu: na ụdị ọ bụla nke interface ihe dị otú ahụ dị. M ga-egosi ọtụtụ nhọrọ maka ọnọdụ nke ihe a iji mee ka o doo anya ebe ị ga-ele anya.
Iji banye BIOS, ị na-achọkarị pịa bọtịnụ Del (na kọmputa) ma ọ bụ F2 (na laptọọpụ) ozugbo ị gbanye ya. Otú ọ dị, enwere nhọrọ ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, na UEFI na Windows 8.1, ị nwere ike ịbanye na ntọala site na iji ntinye nhọrọ ịkpụ. (Otu esi abanye na Windows 8 na 8.1 BIOS).
Na ochie BIOS nsụgharị, na ibe ntọala nwere ike ịnwe ihe:
Ngwunye Ngwado Ọrụ Echetara - tọgharịa na ntọala kachasị mma
Nkwụsị ụgwọ ụgwọ-Nchekwa nchekwa - tọgharịa na ntọala ndabara kachasị iji belata ohere nke ọdịda.
Na ọtụtụ laptọọpụ, ị nwere ike ịtọ ntọala BIOS na taabụ "Wepụ" site na ịhọrọ "Ntọala Ntọala Ntọala".
Na UEFI, ihe niile bụ otu ihe ahụ: n'ọnọdụ m, ihe mgbakwunye Ibu Ibu (ndabara ntọala) dị na Ihe nchekwa na wepụ.
Ya mere, n'agbanyeghị ụdị mbipụta nke BIOS ma ọ bụ UEFI interface na kọmputa gị, ị ga-ahụ ihe na-arụ ọrụ iji dozie esemokwu ndabara, a na-akpọ ya otu ebe.
Weghachite ntọala BIOS site na iji mpempe akwụkwọ na motherboard
A na - eji ụda mbadamba ubochi na - ejide onwe gị (ma ọ bụghị - a na - ejide ọnụ), nke na - enye gị ohere ịtọgharịa ebe nchekwa CMOS (ya bụ, niile ntọala BIOS echekwara ebe ahụ). Ị nwere ike ịchọta ihe onye na-eme ọhụụ sitere na oyiyi dị n'elu - mgbe na-emechi kọntaktị n'ụzọ ụfọdụ, ụfọdụ akụkụ nke mgbanwe motherboard, n'ọnọdụ anyị, ọ ga-debe ntọala BIOS.
Ya mere, ịtọgharịa, ịkwesịrị ime usoro ndị a:
Gbanyụọ kọmputa na ike (gbanye ọkụ).
Mepee kọmputa ma chọpụta onye na-ahụ maka nrụpụta CMOS, ọ na-esokarị nso batrị ahụ ma nwee mbinye aka dịka CMOS RESET, BIOS RESET (ma ọ bụ abbreviations site n'okwu ndị a). Nhọrọ atọ ma ọ bụ abụọ nwere ike ibu ọrụ maka nrụpụta.
Ọ bụrụ na enwere kọntaktị atọ, mee ka ọkpụkpụ ahụ gaa n'ọnọdụ nke abụọ, ọ bụrụ na enwere naanị abụọ, mgbe ahụ ka ọ na-abanye na ebe ọzọ na motherboard (echefula ebe ọ si bịa) ma wụnye na kọntaktị ndị a.
Pịa ma jide bọtịnụ ike na kọmputa maka sekọnd 10 (ọ gaghị agbanye, ebe ọ bụ na ike agbanyụ).
Weghachite ndị na-ebuli elu na steeti ha, kpọkọta kọmputa, ma gbanye ọkụ.
Nke a mezigharịrị BIOS BIOS ntọala, ịnwere ike ịtọ ha ọzọ ma ọ bụ jiri ntọala ndabara.
Reinstall batrị ahụ
Ncheta ebe ntọala BIOS na-echekwa, yana igwe elekere nke nne na nna, abụghị ndị na-adịghị mma: osisi ahụ nwere batrị. Iwepu batrị a na-eme ka nchekwa CMOS (gụnyere paswọọdụ BIOS) na elekere iji tọgharịa (ọ bụ ezie na ọ na-ewe oge ole na ole iji chere tupu nke a emee).
Rịba ama: Mgbe ụfọdụ, enwere mbadamba nkume nke batrị ahụ anaghị enwe ike iwepu, kpachara anya ma ghara iji mgbakwụnye ọzọ.
N'ihi ya, iji tọgharịa BIOS nke kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ị ga-achọ imepe ya, hụ batrị ahụ, wepu ya, cheretụ ntakịrị ma tinye ya. Dịka iwu, iji wepụ ya, ọ bụ iji pịa mkpọchi ahụ, ma iji mee ya - dị ka ọ dị mfe pịa ya ruo mgbe batrị na-abanye ebe.